Xulka France oo iska xaadiriyay finalka koobka aduunka 2018, kadib markii ay guul muhiim ah ka gaareen dhigooda Belgium – Gool FM
Xulka France oo iska xaadiriyay finalka koobka aduunka 2018, kadib markii ay guul muhiim ah ka gaareen dhigooda Belgium
CR Shariif July 10, 2018
(Russia) 10 Luulyo 2018. Xulka France ayaa gaaray finalka koobka adduunka 2018 kadib markii ay 1-0 ay ku garaaceen dhigooda Belgium.
Cayaarta ayaa lagu kala maray qeybta hore barbaro 0-0, kadib markii ay labada xul France iyo Belgium ay awoodi waayeen in wax gool ah ay iska dhaliyaan.
Dib markii loogu soo laabtay qeybta labaad ee ciyaarta xulka qaranka France ayaa dhan kasta ka weeraray Belgium laakiin waxaa qatar walba ka badbaadinayay goolhayaha Chelsea Thibaut Courtois. Sidoo kale wiilasha Martínez ayaa iyagana sameeyay weerar is daba jog ah
Laakiin qaabka ciyaarta ayaa is badashay daqiiqadii 51-aad kadib markii uu xulka qaranka France uu la yimid gool waxaana u dhaliyay difaaca kooxda Barcelona Samuel Umtiti, kadib markii uu caawin ka helay Antoine Griezmann, ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 1-0.
kadib weerar iyo weerar celis ay sameeyeen labada dhinac, ayay markale xulka France ku dhawaadeen in ay ciyaarta ka dhigaan 2-0, balse Thibaut Courtois ayaa ka diifay fursad muhiim ah uu helay xidiga reer france ee Tolisso.
Ugu dambeyna kulanka ayaa ku dhamaaday 1-0 oo ay guusha ku raacday xulka qaranka France oo u guday kulanka finalka koobka adduunka waxayna sugu doonaan xulka soo baxa midkood Croatia iyo England.
CADAYN: Riyad Mahrez waa laacib ka tirsan Manchester City (EEG Sawirkaan)
Yaa loo doortay xiddiga garoonka kulankii France ay guusha ka gaartay Belgium?